CNC Knife umsiki
amanzi jet ahlabayo umshini
amanani wethu ingase ishintshe kuye emshinini ukucushwa futhi usinika imakethe isici. Sizokuthumelela i Uhla lwamanani olusha ngemuva eqinisekisa umshini ukucushwa efanelekayo wena kwikhotheshini isebenza ngenyanga eyodwa.
Ungenza inkokhelo ne-akhawunti yethu yasebhange, Western Union noma PayPal: sales@omni-cnc.com.
CNC router-egcwele izinyanga 12 emuva base iwaranti router abakhiqizi CNC futhi olufanele iwaranti 3rd party engeza Ons. Lokhu ihlanganisa izingxenye kagesi kanye lokukhanda ngaphansi 'ekusebenziseni ifoni okuvamile.
Laser Machine-egcwele izinyanga 12 emuva base yesiqinisekiso emshinini laser kanye abakhiqizi olufanele warrty ku 3rd party uhlanganise kunye ngaphandle ezingxenyeni consumable. Warranty ukuze uthole laser tube Reci brand: 6 izinyanga, Lens nezibuko: 3 izinyanga.
CNC Plasma Machine-egcwele izinyanga 12 emuva base sesiqinisekiso futhi olufanele silwenza warraty ku 3rd party uhlanganise kunye ngaphandle ezingxenyeni consumable. Njenge: umlomo wombhobho, electrode, Ukuvikelwa cap njll
Izindleko zokuthumela uxhomeke endleleni okhetha ukuthola izimpahla. Express ngokuvamile esheshayo kakhulu kodwa futhi indlela esibiza kakhulu, kuphela ezifanelekela laser mini noma router. Ngu seafreight isixazululo esingcono ngoba CNC router umshini noma laser, umshini plasma. Uqinisile yizimpahla amazinga singakwazi kuphela ucaphune emva eqinisekisa imodeli umshini, futhi lokhu lesisho frieignt futhi isebenza kuphela ngenyanga eyodwa.
Amadivayisi: 6-50-501 Advanced Business Centre, Tianqiao, Jinan, Shandong
Ifoni: + 86-531-89003210
Skype: ongumninimandla onke-CNC
© Copyright - 2009 - 2018: Wonke Amalungelo Agodliwe.